Snn Nepal एसईईबारे विज्ञहरूको बहस : सानोठिमी कहिल्यै जुम्ला पुगेको छ ? – Snn Nepal
एसईईबारे विज्ञहरूको बहस : सानोठिमी कहिल्यै जुम्ला पुगेको छ ?
काठमाडौं । शिक्षाविद्हरूले एसईई परीक्षा नै खारेज गर्नुपर्ने बहसलाई पुनः जोड दिन थालेका छन् । शिक्षा पत्रकार समूहले सोमबार जुममार्फत् गरेको ‘एसईईलाई के गर्ने’ विषयक बहसमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई सञ्चालन गर्नु नै संविधान विपरीत भएको शिक्षाविद्हरूले दावी गरे ।